Ho fisorohana ny loza mety haterany: nopotehina ireo baomba, grenady, vanja nogiazana hatramin’izay | NewsMada
Par Taratra sur 26/11/2020
Nopotehina teny amin’ny toerana fanaovana fanazaran-tena fitifirana, eny Langaina, ny talata teo, ireo fitaovam-piadiana isan-karazany nogiazan’ny zandary, efa hatrany amin’ny andron’ny Tetezamita tany. Anisan’izany, ohatra, ny baomba, ny grenady, ny vanja sy ny zava-mipoaka…
Notontosaina teny amin’ny kianja fanazaran-tena mitifitra (champ de tirs) any Langaina, afakomaly ny famotehana ara-pomba miaramila ireo baomba vita tanana tratran’ny zandarimaria sy fanandramana ireo basy mahery vaika samy nogiazana nandritra ny taona maro teo anivon’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena Antananarivo. Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny Fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena eto amin’ny faritra Analamanga (CIRGN), ny Jly Rakotondrazaka Andriantsarafara, nisy grenady mahery vaika sy fanazaran-tena, baomba vita tanana ary ireo kazarana baomba nipoaka na tsy nipoaka tamin’ny andron’ny Tetezamita no navondrona ary nopotehina tamin’ny fomba ofisialy. Nisy ny fitanana an-tsoratra natao teny Langaina taorian’ny famotehana ireto baomba ireto. Nisy koa andrana teknika natao tamin’ireo basim-panjakana nogiazana tratra nandritra ny asan-jiolahy maro teto an-drenivohitra, araka ny fanazavan’ity manamboninahitra ity hatrany.
Homena ireo tobin’ny zandary ny basy mbola azo ampiasaina…
Araka ny baiko sy toromarika nomen’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard sy ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena (COMGN), ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa dia hanatanteraka izany koa ireo fari-piadidiana sy ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria manerana ny Nosy. Marihina fa nopotehina teo imason’ny solontenam-bahoaka ireto baomba fampiasan’ny miaramila sy ireo baomba vita tanana na vanja tratra ireto. Hisorohana ny loza mety haterany aoriana indrindra rehefa ela loatra ny fe-potoana hitahirizana azy ireny, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny CIRGN Analamanga hatrany. Ireo basy mahery vaika sy fitaovam-piadiana hafa nogiazana ka hita fa mbola azo ampiasaina kosa dia omena ireo tobin’ny zandarimaria any amin’ny faritra mena mba hanampiana ireo fitaovana enti-mamongotra ny tsy fandriampahalemana.